Esi ewepu ngwa | Gam akporosis
Oge ọ bụla anyị zụrụ ekwentị ọhụrụ, ọ ga-adị mma ka anyị kpochaa nke ọ bụla ngwa anyị agaghị eji nakwa na onye nrụpụta etinyegoro na ngwaọrụ ahụ, ka ha ruru nkwekọrịta akụ na ụba nke pụtara ego ọzọ.
Nsogbu nke bloatware (sọftụwia gụnyere na ngwaọrụ ahụ) esitela na ngwongwo sitere na ndị ọrụ ekwentị anyị gaa na ngwa ndị na-akwụ ụgwọ ịnọ ebe ahụ. N'ime ngwa ndị a, anyị ekwesịghị ịtụle ngwa google, ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha ka anyị ji ha eme ihe.
1 Wepu ngwa ndị arụnyere na gam akporo
2 Iwepụ tupu arụnyere ngwa ọdịnala na-enweghị mgbọrọgwụ
3 Uninstall gam akporo ngwa ọdịnala na-enweghị a Chọpụta
4 Wepu ngwa Google Play
4.1 Site na ihuenyo mbụ
4.2 Site Ntọala
4.3 Na faịlụ Google
5 Etu esi ewepu ngwa na Samsung
6 Wepu ngwa Huawei
Wepu ngwa ndị arụnyere na gam akporo
Mgbe ohere nke ọnụ anyị amalite igosi mgbaàmà nke ike ọgwụgwụ, ikekwe ị na-eche na oge eruola hichapụ ngwa niile na ị naghị eji ya na njedebe gị ma ọ bụ na ị nweghị eji ya.
Ozugbo anyị kpochapụrụ ngwa niile anyị rụnyere na Storelọ Ahịa Play, ọ bụ oge nke ngwa ndị agụnyere n'obodo anyị, ma sitere na Google ma ọ bụ nke ndị nrụpụta ndị ọzọ webatara Samsung, Huawei, Xiaomi ...
Ngwa ndị a, ebe a gụnyere anyị na sistemụ ahụ, anyị enweghị ike iwepụ kpamkpam na ngwaọrụ anyị, naanị anyị nwere ike iwepu ha. N'ihe banyere ngwa Google ọ na-eme ka echiche niile dị n'ụwa ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha nwere njikọta ma ọ bụrụ na anyị ewepụ ya, ọ nwere ike emetụta iguzosi ike n'ezi ihe nke usoro ahụ.
Agbanyeghị, nke a anaghị eme na ngwa ndị gụnyere ndị nrụpụta, ngwa nke ha adịghị mkpa maka iji ngwaọrụ eme ihe, ma ha abanyela n'ime sistemụ arụmọrụ, yabụ na anyị enweghị ike iwepu ha, gbanyụọ ha.
Mgbe ị gbanyụrụ ngwa ahụ, ha kwụsịrị igosi gị na drọwa ngwa ahụ, mana ha ka nọ ebe ahụ, n'ụzọ zoro ezo anyị nwere ike ikwu. N'ihi na gbanyụọ ngwa na gam akporo, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Anyị na-enweta Ntọala nke ngwaọrụ anyị wee pịa Aplicaciones.
N'akụkụ a, anyị ga-pịa na asụsụ ala anyị chọrọ iji gbanyụọ.
Na windo na-esote, pịa Gbanyụọ.
Iwepụ tupu arụnyere ngwa ọdịnala na-enweghị mgbọrọgwụ
Afọ ole na ole gara aga, naanị usoro iji hichapụ ngwa ndị arụnyere na ama ọ bụ site na iji mgbọrọgwụ, ịwụnye ụlọ na-enweghị ngwa nke ndị nrụpụta ma ọ bụ ndị ọrụ. Otú ọ dị, ka ọtụtụ afọ gafere, ndị na-emepụta na-emechi ọnụ ụzọ a ka ọ gharazi inwe ike iwepụ iji kpochapụ ngwa na ngwaọrụ ndị kachasị ọhụrụ.
Ọ dabara nke ọma Ha adịghị mkpa mgbọrọgwụ ikikere iji kpochapụ ihe ọ bụla nke ngwa ndị nrụpụta gụnyere na ngwaọrụ anyị. N'ezie, usoro ahụ adịghị mfe ebe ọ bụ na anyị ga-eji ngwa ADB, ngwa maka ndị mmepe na-enye anyị ohere ịnweta akara iwu nke njedebe anyị iji hichapụ ngwa anyị chọrọ.
Usoro maka iwepụ ngwa ọdịnala na-enweghị akara Anyị na-akọwa ya na ngalaba na-esote. Tupu ịmalite usoro a, ị ga-eburu n'uche na ọ bụrụ na iweghachite ngwaọrụ ahụ site na ncha, ngwa niile ịhichapụrụ ga-adị ọzọ, ebe usoro a weghachite ndabere nke ọnụ na-ahapụ ya ka ọ dị ọhụrụ site na igbe ahụ.
Uninstall gam akporo ngwa ọdịnala na-enweghị a Chọpụta
Usoro wepụ na-enweghị Chọpụta ngwa ngwa nke anyị ji ewepụta ọnụ anyị, ọ bụghị nsogbu dị mfe. Wepu ngwa nke na-agaghị ekwe m Ọ bụ otu n'ime ajụjụ ndị anyị na-enweta oge karịa na Androidsis yana anyị dozie ya n'isiokwu a.
Iji wepu ngwa gam akporo na-enweghị akara, anyị ga-eji ngwa ADB (dịka m kọwara na ngalaba gara aga), ngwa ọrụ ị nwere ike budata na njikọ a. Wepụ faịlụ ahụ na mgbọrọgwụ nke usoro C: \_ ma anyị na-eme usoro ndị akọwapụtara n'okpuru:
Ihe mbu anyi gha eme bu ime ihe Mmepụta nhọrọ (site na ịpị nọmba ụlọ ahụ ọtụtụ ugboro)
Ọzọ, anyị na-eme ka ọnọdụ ahụ rụọ ọrụ Mkpebi USB.
Anyị na-ejikọ ekwentị anyị na kọmputa. N'ime ngwaọrụ anyị windo ga-egosipụta nke ahụ na-akpọ anyị òkù ịnakwere igodo RSA iji mepụta oge site na kọmputa. Nke a na usoro na-ekwe nkwa na anyị nwere ohere unlock kpọghee ekwt ngwaọrụ (bia, iji jide n'aka na ọ bụ nke anyị).
Mgbe ahụ anyị nweta iwu ozugbo site na igbe nchọta Cortana site na ịpinye CMD.
Ọzọ, anyị na-aga ndekọ ebe faịlụ ndị anyị budatara dị ma depụtaghachi ya na mgbọrọgwụ nke kọmputa anyị site na iwu «cd ..» iji gaa na ndekọ gara aga na «cd directoryname» iji nweta ndekọ ahụ. Iji depụta akwụkwọ ndekọ aha anyị na-ede "dir". A ghaghị ide iwu ndị ahụ na-edeghị ede.
Ozugbo anyị nọ na ndekọ aha anyị na-ede "adb ngwaọrụ" (na-enweghị nkwupute) na njikọ ngwaọrụ.
Ọzọ anyị na-ede "adb shei pm packages packages" na-enweghị ruturu ka a na-egosipụta ngwa niile arụnyere na kọmputa.
Ozugbo anyị nwere chọtara aha ngwa ahụ anyị chọrọ wepu anyị ga - ede "adb shei pm uninstall -k –user 0 package-name" (na-enweghị isi okwu) ịbụ ngwugwu aha ngwa anyị chọrọ iwepụ na ngwaọrụ anyị.
Na nke a, anyị nwere wepu ngwa Flipboard (adb shei pm iwepụ -k –user 0 flipboard.boxer.app) na Samsung gụnyere na njedebe ya na nke ahụ anaghị enye anyị nhọrọ iji kpochapụ ya, gbanyụọ ya.
Wepu ngwa Google Play
Site na ihuenyo mbụ
Iwepu ngwa arụnyere na ihuenyo ụlọ ma na-abịa site na Storelọ Ahịa Play dị mfe dịka:
Pịa ma jide akara ngosi ngwa maka sekọnd ole na ole.
Na gburugburu menu na-egosi, pịa Ozi ngwa.
N'ikpeazụ, pịa Iwepu.
Nhọrọ ọzọ iji wepu ngwa site na ama anyị sitere na Playlọ Ahịa Google bụ site na Ntọala nke ọnụ anyị.
N'ime Ntọala site na ọnụ anyị, pịa na Aplicaciones.
Ọzọ, anyị ga-pịa na ngwa na anyị chọrọ ihichapụ.
N'ikpeazụ, pịa Iwepu iwepu ya na otu anyị.
Na faịlụ Google
Anyị nwekwara ike iji Google faịlụ iji wepu ngwa site na ngwa ngwa ngwa Google.
Ozugbo anyị meghere Google Files, anyị na-achọ ngalaba ahụ Aplicaciones.
Site na ndepụta nke ngwa, anyị na-achọ nke ahụ anyị chọrọ ihichapụ ma pịa isi ihe atọ dị na vetikal.
N'ikpeazụ, anyị ga-pịa Iwepu site na menu nhọrọ egosiri.
Etu esi ewepu ngwa na Samsung
Usoro iwepụ ngwa na ọnụahịa Samsung bụ otu ihe ahụ dị ka nke gara aga, yabụ anyị nwere ike iji ụzọ atọ ọ bụla na m gosiri na aga na ngalaba.
Wepu ngwa Huawei
Usoro iwepụ ngwa awụnyere na Huawei smartphone Ọ bụ otu ihe ahụ dị na Samsung na gburugburu gam akporo niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Iwepu ngwa
The Mobile World Congress 2021 na Barcelona ga-abụ oge ọkọchị a ma nwee enyemaka ihu na ihu